Haweeney Ajnabi ah oo Muqdisho lagu afduubtay | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Haweeney Ajnabi ah oo Muqdisho lagu afduubtay
Haweeney Ajnabi ah oo Muqdisho lagu afduubtay
Haweeney u dhalatay dalka Jarmalka oo aheyd Kalkaaliso caafimaad ayaa fiidnimadii xalay waxaa laga dhex afduubtay xarunta Hay’adda ICRC ee Magaalada Muqdisho, waxaana Haweeneydan ay Muqdisho u joogtay howlo shaqo mudo ku siman laba Isbuuc.
Afhayeenka Wasaaradda Amniga Soomaaliya C/casiis (Xildhibaan) oo la hadlay Idaacadda Radio baidoa ayaa xaqiijiyay afduubkan, wuxuuna tilmaamay in ay ka dambeeyaan qaar ka tirsan ilaalada Hay’adda oo gaari kula baxsaday Haweeneyda, balse markii dambe Hay’adaha ammaanka ayaa ku guuleystay in ay gacanta ku soo dhigaan gaariga.
Ciidamada ammaanka ayaa markii ay ka war heleen Afduubkaasi waxa ay ka daba tageen gaarigii lagula cararay Haweeneyda, waxaana ay gacanta ku soo dhigeen gaadiidka Hay’adda, meel aan ka fogeyn Tarbuunka, oo ku dhaw xarunta ICRC.
“Markii Ciidamadeena ay ka war heleen in afduubkaas uu ka dhacay gudaha xarunta oo ay geysteen ilaalada, Ciidamadeena waxaa u suuragashay in ay gacanta ku soo dhigaan gaariga, balse Dableyda gaari kale ayay kula baxsadeen gabadha, laamaha amniga ayaa ku daba jira raggan.” Ayuu yiri C/casiis (Xildhibaan).
Gudoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Magaalada Muqdisho C/raxmaan Cumar Cusmaan (Eng. Yariisow) ayaa waxa uu sheegay in ay wadaan baaritaano arrintan ku saabsan.